China Distillation Equipment စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ LYBH
စွန့်ပစ်ရေနံသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးမော်လီကျူးပေါင်းခံစက်များသည်ဆူညံခြင်းကွာခြားချက်နိယာမအပေါ်မှီခိုရသည့်အစဉ်အလာပေါင်းခံခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလေဟာနယ်အက်တမ်အက်တမ်အက်တမ်အမှတ်တံဆိပ်အက်တမ်အက်တမ်အက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုသည်။ မြင့်မားသောလေဟာနယ်မော်လီကျူးပေါင်းခံသည့်နည်းပညာသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၃၅၀ ခန့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အရည်နှင့်အရည်ကိုခွဲထုတ်ရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရာဝတ္ထုများ၏မော်လီကျူးရွေ့လျားမှု၏ဆိုလိုရင်းလွတ်လပ်မှုအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မော်လီကျူးရွေ့လျားမှု၏လွတ်လပ်သောလမ်းကြောင်းသည်ကပ်လျက်နှစ်ခုတိုက်မိရာမှမော်လီကျူးတစ်ခု၏ခရီးအကွာအဝေးကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဆီကိုအပူပေးသောအခါဆီ၏ပေါ့ပါးပြီးလေးလံသောမော်လီကျူးများသည်မျက်နှာပြင်အရည်နှင့်ဓာတ်ငွေ့အဆင့်သို့ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်။ အလင်းနှင့်လေးလံသောမော်လီကျူးများ၏လွတ်လပ်သောလမ်းကြောင်းများမှာကွဲပြားသောကြောင့်၊ ကွဲပြားသောအရာဝတ္ထုများ၏မော်လီကျူးများသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအရည်များကွဲထွက်သွားစေရန်ကွဲပြားခြားနားစွာရွေ့လျားသွားသည်။ ၏ရည်မှန်းချက်။ လေဟာနယ်အက်တမ်စက်ရုံမှအလင်းပြန်ခြင်းနည်းပညာသည်မော်လီကျူးစီးဆင်းမှုကိုမြန်စေသည်သာမကရေနံထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။
1. decompression catalytic pyrolysis နည်းပညာနှင့်ထုတ်ကုန်ဓာတုပစ္စည်းထုတ်ယူခြင်းနည်းပညာချမှတ်။
2. အတော်လေးပြည့်စုံပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည်။ ဥပမာ - ဓာတ်ငွေ့မီးခိုးငွေ့များနှင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအခန်းများကဲ့သို့
4. စွန့်ပစ်သောဆီ၏အထွက်နှုန်းနှုန်းသည် ၈၀% ထက်မနည်းပါ။
၅။ စွမ်းဆောင်ရည်သည်လုံခြုံပြီးယုံကြည်စိတ်ချရပြီးထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသည်အဆင့်မြင့်သည်၊ အလိုအလျောက်ဒီဂရီမြင့်မားသည်။
သိပ်သည်းဆ(kg / m³ @ 20 ℃)
Kinenatic ထဲမှာပါတဲ့(sSt @ 40 ℃)
ကယ်လိုရီတန်ဖိုး(MJ / kg)
စွန့်ပစ်ရေနံအခြေစိုက်စခန်းရေနံ / အမေရိကန် API ကို lube အခြေစိုက်စခန်းရေနံခွဲရန်စံသတ်မှတ်ချက်စံ
ရှေ့သို့ Carbon Black ကြိတ်ပစ္စည်း
နောက်တစ်ခု: Oilsludge Pyrolysis စက်ရုံ
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: သံလိုက်ခွဲခြင်းနှင့်ကြိတ်ခွဲခြင်းပြီးနောက်စွန့်ပစ်ယာယာ pyrolysis မှထုတ်လွှတ်သောကာဗွန်အနက်ရောင်ကိုအကူးအပြောင်း bin သို့ပို့သည်။ ရေကိုအချိုးကျအချိုးကျရောစပ်ထားသောအိုး၌ကော်နှင့်ရောစပ်သည်။ Batch B tank သည်သတ်မှတ်ထားသောအချိုးအစားအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းရောနှောရောစပ်ပြီးစိုစွတ်သော granulation ပြုလုပ်ရန် granulator သို့ရောနှောပေါင်းစပ်သည်။ sieving.The ကြီးကြပ်သောအစိတ်အပိုင်းပြီးနောက်အပြည့်အဝခြောက်သွေ့ရန်အခြောက်ခံစက်ထဲသို့ကာဗွန်အနက်ရောင်အမှုန့်များပြီးပါက ...
စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ်သန့်စင်စက်ရုံ, အမှိုက်ပုံးအားပြန်လည်အသုံးချစက်, စဉ်ဆက်မပြတ် Pyrolysis စက်ရုံ, တုရုပြာ, သုတ် Pyrolysis စက်ရုံ, ပလတ်စတစ်ပြန်လည်ပြုပြင်စက်,